Best Chigadzirwa Magadzirirwo e260KW Biomass Gesi jenareta Mugadziri uye Fekitori Naipute
Genset Muenzaniso 260GFT - J1
Rated Simba (kW / kVA) 260/325
Yakarongwa Izvozvi (A) 468
Kunopindirana divi (L * W * H) (mm) 3250 * 1550 * 1950
Kurema kweNet (kg) 2680
Muenzaniso NY196D28TL (AVL Technology)
Type Inline, 4 kurohwa, magetsi kudzora kuvesa, pre-yakavhenganiswa uye turbocharged yepakati-yakanyorovera kuonda kupisa.
Rated Simba (KW) 280
Rudzi rwemafuta Biomass gasi
Muenzaniso 260KZY, NPT muchiso
Kubudirira (%) 93.2
(1) Chidimbu chinoshandisa bhaira rinodzidziswa gasi rinogona kusanganisa negasi kana pombi gasi pasi pemamiriro ekuti iro rekutanga bhaira michina haina kuchinja, kuitira kuti ideredze zvakanyanya kudyiwa kwega gasi kana gasi repombi uye kudzikisa mutengo wegesi.
(2) Munzvimbo dzekugara uchishandisa gasi, pombi gasi uye zvakajairwa biogas, vanogona kusunganidzwa kune grid yekupa gasi kumhuri, kudzikisa mutengo wegesi, uye kuwedzera mubereko wekutengesa gasi zvakanyanya nemutengo mumwe chete wekutengesa gasi.
(3) Iyo gasi rezvisikwa rinogadzirwa nemidziyo iyi inoshandiswa kutyaira injini yemoto yemukati yekugadzira magetsi. Simba rekugadzira simba i20-1000KW / h. kana iri shoma kana kuti yakakura kupfuura iyi renji, inogona kunyatsogadzirirwa vashandisi.
Pashure: Chigadzirwa Magadzirirwo E200KW Biomass Gesi jenareta
Zvadaro: Chigadzirwa Magadzirirwo E400KW Biomass Gesi jenareta
Chigadzirwa Magadzirirwo E10KW Biomass Gesi Gen ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E50KW Biomass Gesi Gen ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E150KW Biomass Gesi Ge ...
Chigadzirwa Magadzirirwo E200KW Biomass Gesi Ge ...